Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ (71-58-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ
SKU: 71-58-9. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Medroxyprogesterone acetate powder (71-58-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ bụ progestin (ụdị progesterone), hormone nwanyi nke na-enyere aka ịhazi ovulation (ntọhapụ nke àkwá site na ovary) na oge izu ike. A na-eji ọgwụ medroxyprogesterone emeso ọnọdụ ndị dịka enweghi oge, ma ọ bụ ọbara ọgbụgba na-adịghị mma.
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ video
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ isi agwa
aha: Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ
Ọbara arọ: 386.52
Mgbanwe Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ
Aha ukwu (S): Medroxyprogesterone
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ eji
N'ime ụmụ nwanyị, ihe kachasị eji MPA eme ihe bụ ọgwụ mgbochi nke ụmụ nwanyị premenopausal na dịka akụkụ progesin nke ọgwụ mgbochi mịnopa na ụmụ nwanyị postmenopausal tinyere nke estrogen iji gbochie hyperplasia endometrial na cancer.It bụ ọgwụgwọ dị irè mgbe e ji ya mee ihe iji gbochie oke nwa. A na-ejikwa MPA mee ihe dịka ọgwụgwọ maka endometriosis, dysmenorrhea, na amorrhea. Mgbe a na - emepụta ndị ọzọ, a na - eme MPA iji kwe ka a na - ewere hormones okwu ọnụ, dịka progesterone (hormone nke ahụ mmadụ mere) enweghị ike ikwu okwu n'ihu E mepụtara usoro micronization.
MPA a na-egbu ya na-eme ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ ma jiri ya mee ihe dị ka ụdị nke chịkọtara chịkwaa iji chịkwaa àgwà ndị na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ ndị na-achọghị na ndị na-enwe mmekọahụ ma ọ bụ mmekọahụ rụrụ arụ, gụnyere na ndị omempụ mara mma. nri na-akpali agụụ maka ndị ọrịa cancer, na na akwa doses (800 mg kwa ụbọchị) iji na-agwọ ọrịa cancer nke na-adabere na hormone nke bụ isi ara, ma ndị ọzọ ụdị.MPA ka a na-edekwa na ọgwụ na hormone feminizing maka ụmụ nwanyị transgender n'ihi ya progestogenic na nsogbu antigonadotropic.
Ọ bụ ezie na ejighị ọgwụgwọ maka ọrịa na-efe efe, MPA achọpụtawo iji belata oge ihe nkedo na anaghị emekọrịta ọgwụ ọgwụ na-emegide ọrịa. MPA anaghị egbochi ọgbụgba ọbara na-eme ka ọ dị mma iji mepụta ọbara ọbara maka ụmụ nwanyị nwere sickle cell anemia. N'otu aka ahụ, MPA apụtaghị na ọ na-emetụta ọrịa mgbochi imeju, ọ pụkwara ime ka mmachi biliary cirrhosis na ọrịa ịba ọcha n'anya na-adịghị ala ala. Ndị inyom na - ewere MPA nwere ike ịhụ na obere oge mgbe ha malitere ọgwụ ahụ mana ha anaghị adịkarị mkpa iji nweta ọgwụgwọ. Ogologo oge iji amorrhea nwere ike ime dika enweghi ike ichota ihe nke bu isi ihe na enweghi obi uto, obu ezie na ha abua nwere ike ime ka ndi mmadu meziwanye na enweghi uzo na ihe ize ndụ nke oria ojoo pelvic na adighi eme ka ha kwusi ogwu.
Kedu ihe bụ usoro ọgwụgwọ nke Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ
MPA dị naanị ụdị 2.5, 5, na 10 mg tablets, dị ka 150 mg / mL (1 mL) ma ọ bụ 400 mg / mL (2.5 mL) nkwusio mmiri maka intramuscular ogwu, na dịka 104 mg (0.65 ML nke 160 mg / mL) nnukwu nkwusioru maka injection subcutaneous. A kọwakwara na a ga-ere ya n'ụdị 100, 200, 250, na 500 mg na mbadamba ụrọ na dịka nkwụsịtụ 50 mg / mL maka nkwonkwo intramuscular. A na-enwe ọgwụ mgbochi 100 mg / mL maka nkwonkwo nke intramuscular na mbụ. Na mgbakwunye na ụdị ọgwụ ọjọọ, MPA dị n'ụdị mbadamba ụrọ jikọtara ya na estrogens conjugated ma ọ bụ estradiol maka iji mee ihe na ọgwụ mberede homopausal, ma dị na Ejikọta na estradiol cypionate dịka ngwakọta ọgwụgwọ.
Olee otú ọrụ ọgwụ Medroxyprogesterone acetate na-arụ
Medroxyprogesterone bụ ụdị hormone nke nwanyi (progestin). N'iji ọgwụ a yiri nke ahụ nke ahụ gị na-eme ma nye ya ka ọ dochie hormoni mgbe ahụ gị adịghị ezu ya. Nri a nwere ọtụtụ ojiji. N'ime ndị inyom na-adịghị ime ime ma ghara ịṅụ ọgwụ mgbochi nwoke, a na-eji ọgwụ a agwọ ọrịa na-adịghị mma site na akpanwa na iji weghachite oge oge nwanyi na-akwụsị ịhapụ ha ruo ọtụtụ ọnwa (amenorrhea).
A na-ejikwa ọgwụ medroxyprogesterone mee ihe dị ka akụkụ nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke ọgwụgwọ na ọgwụ na estrogens iji belata ihe mgbochi ndị nwoke na-eme (dịka, ọkụ ọkụ). A na-agbakwunye ọgwụ Medroxyprogesterone na usoro ọgwụgwọ na-edozi anya nke estrogen iji belata ihe ize ndụ nke cancer nke akpanwa.
Uru nke Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ site na ogwu nwere ọtụtụ uru:
Ọ dị oke irè n'igbochi afọ ime.
Gwunye ọ bụla 12 izu. Nanị ihe na-aga n'ihu bụ ịde nsonye ịgbasochi izu ọ bụla izu iri na abụọ, na nyochaa mmetụta dị iche iche iji jide n'aka na ha anaghị achọ ọgwụgwọ.
Enweghị estrogen. Enweghị ihe ize ndụ dị ukwuu nke thrombosis vein (DVT) miri emi, ihe mgbagwoju anya (PE), ọrịa strok, ma ọ bụ mgbapụta myocardial.
Mmekọrịta ọgwụ ọjọọ dị nta (ma e jiri ya tụnyere ọgwụ mgbochi ndị ọzọ).
Mbelata ọrịa cancer endometrial. Depo-Provera na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa cancer endometrial site na 80% .Ọdịiche dị ize ndụ nke ọrịa cancer endometrial na Depo-Provera ndị ọrụ na-eche na ọ bụ n'ihi mmerụ ahụ nke progestogen kpọmkwem na njedebe na mbelata nke etiti estrogen. mkpochapụ nke mmepụta nwa ovarian follicular.
Mbelata nke enweghi eriri ígwè, pelvic ọrịa na-afụ ụfụ (PID), ime afọ ectopic, na fibroids uterine.
Mbelata nke mgbaàmà nke endometriosis.
Mbelata ụbụrụ nke dysmenorrhea isi, ihe mgbu nke ovulation, na nke cystarian ovarian arụ ọrụ.
Mbelata ihe nkedo nke ụmụ nwanyị nwere ọrịa na-efe efe. Ọzọkwa, n'adịghị ka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ na-eme ka hormonal, arụmọrụ igbochi Depo-Provera adịghị emetụta ọgwụ ọjọọ na-eme ka enzyme-inducing drugs antiepileptic.
Mbelata ọrịa na ọnyá sickle cell na ụmụ nwanyị nwere ọrịa sickle-cell.
Ụlọ Ọrụ Ahụike nke United Kingdom ejiriwo ịnụ ọkụ n'obi mee ka ogologo oge na-arụ ọrụ nkwụsịtụ na-agbanwe agbanwe kemgbe 2008, karịsịa maka ndị na - eto eto, na - agbaso site na October 2005 National Institute for Health and Clinical Excellence guidelines.Ọnye ndụmọdụ na usoro ndị a nke ime mgbochi ka esonyere na 2009 Ọdịdị na Nsonaazụ Nsonaazụ "ezigbo omume" maka nlekọta isi.
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ ahịa
Mkpụrụ ọgwụ Medroxyprogesterone acetate na-emetụta ihe ọ bụla
Nweta enyemaka ahụike mberede ma ọ bụrụ na ịnwere ihe ịrịba ama nke mmeghachi omume nro na medroxyprogesterone: hives; ike iku ume; ịba ihu gị, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ akpịrị.
ọbara ọgbụgba ma ọ bụrụ na ị banyela na mpụga;
mmetụta dị nro, dị ka ị nwere ike ịpụ;
mgbaàmà nke ịda mbà n'obi (nsogbu ihi ụra, dizziness, mgbanwe ọnọdụ uche, isi ọwụwa);
jaundice (na-acha odo odo ma ọ bụ anya);
bupu aka gị, nkwonkwo ukwu, ma ọ bụ ụkwụ;
ihe mgbaàmà obi ọgụ-obi mgbu ma ọ bụ nrụgide, ihe mgbu na-agbasa n'apata ma ọ bụ ubu gị, ọgbụgbọ, ịṅụ ọkụ;
ihe mgbaàmà nke mberede ma ọ bụ adịghị ike mberede (karịsịa n'akụkụ otu akụkụ nke ahụ), isi ọwụwa na mberede, nkwarụ okwu, nsogbu na ọhụụ ma ọ bụ nguzozi;
ihe ịrịba ama nke ọbara na-ejikọta na ụbụrụ obi-ụbụrụ, ụkwara mberede, na-egbuke egbuke, iku ume ngwa ngwa, ụkwara ọbara; ma ọ bụ
ihe ịrịba ama nke ọbara na-ejikọta na ụkwụ gị-ihe ngbu, ọzịza, ọkụ, ma ọ bụ ọbara ọbara na otu ma ọ bụ abụọ ụkwụ.
Esi zụta Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ si AASraw
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ Ezi ntụziaka
1 nyochaa maka Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi